Iinqwelo zokuthenga ezinemisebenzi emininzi, uyifanele | UDuoduo
Kwinqwelo othengela kuyo uneenjongo ezininzi, uyifanele
Inqwelo yokuthenga eneenjongo ezininzi, amandla amakhulu, anokuhlala kwaye asonge, athandwe ngokunzulu ngabathengi!
Ngokuphuculwa kwemigangatho yokuphila, iimfuno zabantu kumgangatho wobomi nazo ziya ziphuma zisiya phezulu, ekwakhuthaza kakhulu inqanaba lokusetyenziswa. Abantu baya kwivenkile ezinkulu baye kuthenga, baye kwintengiso yevenkile zokuthenga ukuze bathenge ukutya, kwaye bathenge iimpahla ezininzi ngaxeshanye. Ke umbuzo ngulo, ungazihambisa njani ezi zinto emotweni yakho? Ngapha koko, akukho nzima. Sifuna kuphela inqwelo yokuthenga ukusombulula le ngxaki ngokulula, kwaye ikwonyusa kakhulu uyolo lwethu lokuthenga!
Namhlanje ndiza kwabelana nawe ngenqwelo yokuthenga eyahlukeneyo eyahlukeneyo enokuhlala kwaye isonge kwaye inesikhundla esikhulu, esaziwa kakhulu phakathi kwabathengi. Yonke usapho lufanelwe kukuba nenqwelomoya kunye nenqwelomoya yokuthenga, ngokuqinisekileyo umncedisi wakho olungileyo wokuthenga.
Yibone? Kulula ukusonga, ukusonga ngokukhawuleza kwimizuzwana emi-5, inqwelo yokuthenga esongiweyo incinci kakhulu, ayithathi ndawo, kwaye kulula ukuyiphatha! Ayisiyiyo loo nto kuphela, le nqwelo yokuthenga inokusetyenziswa njengebhokisi yokugcina, beka i-lever phantsi, ibhokisi yokugcina inokufakwa ngokulula esiqwini semoto yethu, ukuze isiqu semoto yakho singabinangxaki. Kongezwa amavili amabini kwindalo yonke ngaphambili kwinqwelo yokuthenga, ukuze sikwazi ukuyiTsala kwaye siyitsale ukuze isetyenziswe ngokulula. Ewe kunjalo, akufuneki ukuba sikhathazeke malunga nenqwelo yokuthenga eqengqelekayo kwithambeka xa usihla ezantsi. Imoto yethu inoyilo lwebrake, nceda ubone lo mfanekiso ungezantsi: